Ny Samsung Galaxy A50 dia mahazo ny patch farany fiarovana | Androidsis
Ny Samsung Galaxy A50 dia mahazo ny patch farany azo antoka
El Galaxy A50 Izy io dia iray amin'ireo elanelam-potoana afovoany tsara indrindra napetrak'i Samsung teo ambony latabatra tamin'ny faran'ny volana feb. Ity fitaovana ity dia noraisina tsara teny an-tsena noho ny kalitaony, izay mitazona lanjany tsara amin'ny vola. Raha tsy misy fisalasalana, izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra azontsika jerena ao amin'ilay sehatra.
Nahazo fanavaozam-baovao marobe avy amin'ny mpamokatra Koreana Tatsimo ilay finday. Ny farany tamin'ireo dia natomboka efa ho roa herinandro lasa izay ary nampiditra zava-baovao roa manan-danja ao amin'ny fizarana sary sy ny fahafaha mamaky kaody QR mivantana avy amin'ny fakantsary nefa tsy mila mampiasa ny mpanampy Bixby. Saingy tsy mbola nisy an'io Tonga amin'ny finday ny patch fiarovana ny volana Jolay, ary hiresaka momba izany eto ambany isika.
Ny fanavaozana farany izay voarain'ny Samsung Galaxy A50 dia teo ambanin'ny kinova firmware A505FDDU2ASF2 ary nanomboka nozaraina tany India. Ilay vaovao izay ampiharina amin'ny terminal izao tonga amin'ny A505GUBS3ASF5. Toa tsy misy fanovana lehibe eo amin'ny interface an'ny telefaona, ary tsy mitondra fiasa vaovao na zavatra hafa toa izany.
Ny changelog dia tsy miaraka amin'ity fanavaozana ity. Noho izany, tsy azonay antoka ny milaza izay vaovao ho avy amin'ny finday. Izahay dia afaka manome toky fa ny patch security amin'ity volana ity no hany zavatra azon'ny Galaxy A50 isaorana azy; raha izany no izy, ny fiarovana farany farany eo amin'ny sehatry ny fiarovana sy tsiambaratelo dia efa misy amin'ny telefaona.
Etsy ankilany, ny famerenana kely ny famaritana sy ny mampiavaka an'io eo afovoany, Marihina fa mampiasa efijery Super AMOLED 6.4-inch miaraka amina vahaolana FullHD + izy io ary ny notch miendrika rano mitete iray, processeur Exynos 9610, RAM 4/6 GB, ROM 64/128 GB, bateria 4,000 mAh, fakan-tsary telo ambin'ny folo MP 25 MP + 8 MP + 5 MP ary sensor 25 anoloana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Samsung Galaxy A50 dia mahazo ny patch farany azo antoka
Ny mpiasan'ny Google dia mihaino ireo audio nangonin'i Google Assistant sy Google Home
Tinder Lite hanomboka tsy ho ela ho an'ny telefaona Android